Injineero Shiineys ah oo Tobaadkan Booqanaya Dekedda Hobyo - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Wararka Galmudug » Injineero Shiineys ah oo Tobaadkan Booqanaya Dekedda Hobyo Date :January 31, 2018 Author :admin 597 views
Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog-ogaal Waxaa la filayaa in Todobaadkan gudihiisa ay Magaalo xeebeedka Hobyo gaaraan Injineero Shiineys ah, kuwaas oo qiimeyn ku sameyn doona dhismaha dekedda. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug ayaa dadaal dheeri ah ku bixinaya sidii loo hirgalin lahaa dhismaha dekedda Hobyo. oo noqonaysa hadii la dhiso isha dhaqaalaha Galmudug.
Naqshadda dhismaha dekedda Hobyo. Xuquuqda sawirka www.ceelhuur.com
Dhismaha dekedda ayaa la filayaa inuu noqon dhowr waji, iyadoo waji koowaad la dhisi doono deked kooban, taas oo si kumeelgaar ah loo sii isticmaali doono inta laga gaarayo dhismaha dekedda weyn. hirgalinta mashruucan ayaa ah midka ugu balaaran oo ay ku riyoonayaan shacabka Galmudug.
Dhanka kale Waxaa sara u kacay gadashada dhulka magaalada Hobyo, dadka ayaa danaynaya in ay dhul deegaan iyo ganacsi in ay ka helaan halkaasi, waxaana sidoo kale la filayaa in dhawaan laga hirgaliyo mashaariic ay ka mid yihiin mashruuca diyaarinta iyo keydinta kalluunka. sidoo kale korontada magaalada ayaa la filayaa in ay la wareegto shirkadda Beco.
Sidoo kale waxaa dhawaan hobyo la geyn doono urur ka tirsan qeybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo sugi doona ammaanka deegaanka. Waxaa muuqata yididiilada dib u soo kabashada magaalada Hobyo.